Adobe Capture: Saripika izao tontolo izao ary adikao amin'ny kaody miloko | Famoronana an-tserasera
Ny fitaomam-panahy dia hatraiza hatraiza ary ny karazan-kevitra rehetra dia manodidina antsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy fantatro raha sendra anao izany hoe nandeha an-dalambe ianao ka sendra zavatra: olona, ​​varavarankely fivarotana, tranobe na takelaka dokambarotra ary tsapanao tampoka aingam-panahy ary misy fiatraikany amin'ny fomba atambatra ireo singa, ny loko na ny endrika. Avy hatrany dia te hiara-miasa amin'ireo loko ireo ianao fa raha ny lojika dia tsy manana fahitana amin'ny taratra X ianao ary tsy afaka mamantatra amin'ny marimaritra iraisana ilainao ireo feo nampiasana anao. Maka sary ny zavatra resahina ianao ary amin'ny solosainao miaraka amin'ny masomaso dia maka santionany amin'ireo loko ireo ianao mba hanombohana miasa miaraka amin'izy ireo avy hatrany. Na izany aza, ny isan'ireo feo hitanao amin'ny sary (lozika) dia tsy manam-petra ary ny fahitana ny vahaolana tena ilaina sy lehibe hitanao dia mitaky asa.
Raha toa mahazatra anao io, dia manana vaovao tsara aho satria Adobe Capture CC afaka manampy anao haingana be izy io. Amin'ity rindrambaiko ity dia tsy maintsy manokana ny tenanao fotsiny ianao haka sary miaraka amin'ny fitaovanao finday ary manomboka manova izay rehetra mihodina manodidina anao ho lohahevitra miloko, borosy ary Toa fa mazava ho azy ianao dia afaka mampiditra amin'ny volavolanao. Tsy mahafinaritra ve?
Sambory ny zava-mahatalanjona an'izao tontolo izao ary amboary miaraka amin'izy ireo
Tsotra ny fandidiana, maka sary ianao ary miovaova amin'ny telefaona findainao. Ho fanampin'izay, Adobe Capture CC dia manome antsika fahafaha-mijery sary an'arivony Adobe Stock ary mahazo ireo fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany. Amin'ity fampiharana ity dia afaka mamorona lohahevitra miloko ianao nefa koa manova sary ho borosy tsara kalitao, noho izany dia tsy mila ny rantsan-tànanao fotsiny ianao na, raha tsy izany dia ny Apple Pencil. Ary koa, raha miasa amin'ny Sketch ianao dia afaka manomboka ny fisamborana anao mivantana avy amin'ity rindranasa ity ary mamorona borosy izay hiseho ho azy ao amin'ny fitaovanao.
Ny Capture CC dia ahafahantsika mamadika ireo zavatra ao amin'ny sarintsika ho endrika namboarina, satria io dia ho ampy ny hidirantsika amin'ny sarintsika ary hampiasana ny rantsan-tànana mba hahalavorary ny endrik'ilay zavatra resahina amin'ny tena marina ary hanitsy ny silhouette aza. Raha mahazo aina bebe kokoa aminao izy, dia azonao atao koa ny manomboka ny Capture CC avy amin'ny Illustrator Draw hahafahanao mampihatra azy eo noho eo amin'ny volavolanao.
Ny zavatra lehibe momba an'io dia ny fandaharana tsy mifantoka amin'ny fiasa amin'ny endrika mijirika ihany fa koa izy io koa dia mifanaraka amin'ny tontolon'ny horonan-tsary. Amin'ny alàlan'ny famoronana ny Looks dia ahafahantsika mampihatra ny lokontsika sy ny volontsika amin'ireo tetikasanay amin'ny alàlan'ny fomba haingana sy haingana be.
Ny zavatra lojika dia ny fandraisanao ny sarinao ary amboarinao ny lohahevitra sy ny borosinao dia te hiara-hiasa amin'izy ireo ianao. Azonao atao amin'ny fomba tsotra izaitsizy izany amin'ny fitehirizana ireo rakitrao ao amin'ny Creative Cloud Library mba hahazoana azy ireo haingana na avy amin'ny rindranasan'ny birao na avy amin'ny rindranasa finday. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mizara ny tranombokinao rehetra amin'ny solosainao birao mivantana avy amin'ny Capture.
Ny iray amin'ireo zavatra tiako momba ireo vokatra farany natombok'i Adobe dia ny tsotra ary ny fiasan'ny interface ho miasa. Amin'ity tranga ity, Adobe Capture CC dia mampiseho efijery voazarazara izay ahafahantsika miditra amin'ny toerana misy azy sy ny fananantsika rehetra eo noho eo nefa tsy mila miala amin'ny pejy lehibe ary mila mifanakalo ny fomba fijery tsirairay. Misaotra an'io fa mora kokoa ny miasa miaraka amina fampiharana marobe miaraka sy amin'ny efijery iray ihany.
Tsy isalasalana fa fampiharana izay atolotray anao eto raha tsy milamina ianao ary manandrana mahazo aingam-panahy avy amin'ny hetsika na scenario rehetra. Ny zavatra tsara momba azy dia maimaimpoana tanteraka ary misy ihany koa ho an'ny iOS sy Android ao amin'ny iTunes App Store sy Google Play platform. Afaka hitanao amin'ny teny Espaniôla izany, ary koa amin'ny teny alemà, sinoa, korea, tseky, danoà, danoà, frantsay, anglisy, italianina, japoney, holandey, norveziana, poloney, portogey, rosiana, soedoà ary tiorka. Na dia tsy maintsy misy fepetra takiana aminao aza ny rafitrao hahafahana manohana ny fampiharana na ahoana na ahoana, dia afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa ianao amin'ny fitsidihana ny pejy ofisialy avy amin'ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe Capture: Saripika izao tontolo izao ary adikao amin'ny kaody loko